आर्थीक अभावमा रानी महल, छाडे प्रशान्त र वर्षाले फिल्म ! - Nepali Cinema News
Home > Nepali > आर्थीक अभावमा रानी महल, छाडे प्रशान्त र वर्षाले फिल्म !
आर्थीक अभावमा रानी महल, छाडे प्रशान्त र वर्षाले फिल्म !
February 11, 2018 Nepali
केही दिन अघि निकै तामझाम सँग पाँचतारे होटलमा मुर्हत गरेको चलचित्र रानी महल आर्थीक अभावमा रहेको चर्चा सिने बजारमा चल्न थालेको छ । केही दिन पहिले तोकीएको समयमा फिल्मको छायांकन सुरु नगरेको कारण देखाउँदै अभिनेता प्रशान्त ताम्राकारले यो फिल्म छोडेको एक हप्ता बित्न नपाउँदै अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीले पनि यो फिल्म छोडेको खबर बाहीर आएको छ ।
वर्षाले पनि तोकीएको समयमा फिल्मको छायांकन नभएको कारणले गर्दा आफुले बाध्य भएर यो फिल्म छोड्नु परेको बताएकी छिन् ।
तोकिएको समयमा किन छायांकन हुन सकेन त फिल्म ? यो कुराको सबैलाई कौतुहलता भएको हुन सक्छ । लामो समय देखी बिभिन्न कारणले चर्चामा रहेको यो फिल्मको निर्माण पक्षले छायांकनको लागी आवस्यक पर्ने पैसाको चाँजो पाँजो मिलाउन नसकेको कारणले गर्दा तोकीएको समयमा फिल्मको छायांकन सुरु हुन नसकेको चर्चा सिनेबजारमा चल्न थालेको छ । तर रानी महल निर्माण पक्षले भने मुर्हत कार्यक्रममा आफुलाई पैसाको समस्या नभएको र यदि पैसाको समयस्या भएको भए पाँचतारे होटलमा मुर्हत कार्यक्रम पनि नगर्ने बताएको थियो ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा पुरानो परम्परा छ । दुई चार लाख सापटी खोजेरै भएपनि कुनै राम्रो र नाम चलेको होटलमा मुर्हत कार्यक्रम गर्ने अनि त्यहि कार्यक्रमको समाचार देखएर नयाँ लगानी कर्ता खोज्ने । कतै रानी महलले पनि यस्तै गर्न खोजेको त होईन ? अहिले चलचित्र वृतमा यहि बिषयले निकै चर्चा पाईरहेको छ ।
त्यसो त पैसाकै कारणले गर्दा अभिनेताद्धय प्रदिप खड्का र पल शाहले पनि यो फिल्म छोडेको भन्ने समाचार प्रकाशित नभएको पनि होईन् ।
यो फिल्म छायांकनमा जाँदा सम्म को को बाहीरीन्छन् र को को भित्रिन्छन्, ? त्यो भने अझै हेर्न बाँकी छ ।